192.168.8.1 -Imigaqo nemiqathango
Wamkelekile kwi 192.168.8.1!
Le migaqo nemiqathango ichaza imigaqo kunye nemigaqo yokusetyenziswa kweWebhusayithi ka-192.168.8.1, ebekwe kwi https://19216881.one/.
Ngokungena kule webhusayithi sicinga ukuba uyayamkela le migaqo nemiqathango. Sukuqhubeka nokusebenzisa i-192.168.8.1 ukuba awuvumi ukuthatha yonke imigaqo kunye neemeko ezichazwe kweli phepha. Imigaqo neMeko zethu zenziwe ngoncedo luka Iimpawu kunye neemeko zeGenerator kwaye i Imigaqo yasimahla kunye neemeko Generator.
Esi sigama silandelayo siyasebenza kule Migaqo nemiQathango, iSiteyitimenti sabucala kunye neSaziso sokuSikhipha kwiNgcaciso nazo zonke iziVumelwano: “Umxhasi”, “Wena” kunye no “Wakho” kubhekiswa kuwe, umntu ongena kule webhusayithi kwaye athobele imigaqo nemiqathango yeNkampani. "Inkampani", "Ngokwethu", "Thina", "Wethu" kunye "Nathi", kubhekisa kwiNkampani yethu. "Ipati", "Amaqela", okanye "Nathi", kubhekisa kubo bobabini abaThengi nakuthi. Yonke imiqathango ibhekisa kunikezelo, ukwamkelwa kunye nokuqwalaselwa kwentlawulo eyimfuneko yokwenza inkqubo yoncedo lwethu kuMthengi ngendlela efanelekileyo ngenjongo yokuhlangabezana neemfuno zabathengi ngokubhekisele ekunikezelweni kweenkonzo zeNkampani, ngokuhambelana kwaye ngokuxhomekeke, umthetho oxhaphakileyo wase-Netherlands. Nakuphi na ukusetyenziswa kwesi sigama singasentla okanye amanye amagama kwisinye, kwisininzi, koonobumba abakhulu kunye / okanye yena, zithathwa njengezinokutshintshana kwaye ke zibhekisa kwinto enye.
Sisebenzisa ukusetyenziswa kweicookies. Ngokungena kwi-192.168.8.1, uvumile ukusebenzisa ii-cookies ngokuvumelana noMgaqo-nkqubo wabucala we-192.168.8.1.
Uninzi lwewebhusayithi ezisebenzisayo zisebenzisa ikhukhi ukuvumela ukuba sifumane iinkcukacha zomsebenzisi ukutyelela ngamnye. Ikhukhi zisetyenziswe yiwebhusayithi yethu ukuvumela ukusebenza kweendawo ezithile ukwenza kube lula kubantu abavakashela iwebhusayithi yethu. Abanye bethu abalingane / abasebenzisana nabo bangabasebenzisa ikhukhi.
Ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela, 192.168.8.1 kunye / okanye abanini-layisenisi bayo banamalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda wayo yonke into ngo-192.168.8.1. Onke amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda agciniwe. Ungafikelela koku ukusukela ngo-192.168.8.1 ukuze uzisebenzisele ngokwakho ukuxhomekeka kuthintelo olubekwe kule migaqo nemiqathango.
Shicilela kwakhona izinto ukusuka ku-192.168.8.1
Thengisa, urente okanye ubenelayisensi encinci ukusuka ngo-192.168.8.1
Phinda uvelise kwakhona, uphindaphinde okanye ukope izinto ukusuka ngo-192.168.8.1
Phinda usasaze umxholo ukusukela nge192.168.8.1
Esi sivumelwano siza kuqala ngomhla woku.
Iinxalenye zale webhusayithi zinika ithuba kubasebenzisi lokuthumela kunye nokutshintshiselana ngezimvo kunye nolwazi kwiindawo ezithile zewebhusayithi. 192.168.8.1 ayicoci, ayilungisi, ayipapashi okanye iphonononge iiNgcaciso ngaphambi kobukho bazo kwiwebhusayithi. Izimvo azibonisi zimvo kunye nezimvo zowe-192.168.8.1, iiarhente zayo kunye / okanye abantu abadibeneyo. Amagqabantshintshi abonisa izimvo kunye nezimvo zomntu othumela izimvo kunye nezimvo zakhe. Ukuya kuthi ga kwinqanaba elivunyelweyo yimithetho esebenzayo, 192.168.8.1 ayizukubekwa tyala kwiiNkcazo okanye ngalo naluphi na uxanduva, umonakalo okanye inkcitho ebangelwe kunye / okanye yokuhlupheka ngenxa yako nakuphi na ukusetyenziswa kunye / okanye ukuthumela kunye / okanye ukuvela kwezimvo kule webhusayithi.
192.168.8.1 unelungelo lokubeka iliso kuzo zonke iiNkcazo kunye nokususa naziphi na iiNkcazo ezinokuthi zithathwa njengezingafanelekanga, ezihlaselayo okanye ezibangela ukuphulwa kwale Migaqo neMeko.
Uyavuma kwaye umela oku:
Unelungelo lokuthumela iiNgxelo kwiwebhsayithi yethu kwaye unayo zonke iilayisenisi eziyimfuneko kwaye uyavuma ukuba wenze njalo;
Iingxelo azifaki naluphi na uhlobo lwepropati yolungileyo, kubandakanywa ngaphandle kwemida ye-copyright, ilungelo lobunikazi okanye uphawu lokuthengisa kwanoma yimuphi umntu wesithathu;
Iingxelo aziquki naluphi na ucoceko, olubi, oluhlaselayo, olungenanto okanye olungekho mthethweni olukhuselekileyo
Iingxelo aziyi kusetshenziselwa ukucela okanye ukukhuthaza ishishini okanye isiko okanye izinto ezikhoyo zorhwebo okanye imisebenzi engekho mthethweni.
Ngale ndlela unika u-192.168.8.1 ilayisensi engakhethiyo yokusebenzisa, ukuvelisa ngokutsha, ukuhlela nokugunyazisa abanye ukuba basebenzise, ​​bavelise kwakhona kwaye bahlele naziphi na iiNkcazo zakho nangazo naziphi na iindlela, iifomathi okanye imithombo yeendaba.
Uxilongo kwi-Content yethu
Imibutho elandelayo inokudibanisa kwiWebhusayithi yethu ngaphandle kwemvume ebhaliweyo yangaphambili:
Arhente ka rhu lumente;
Abalawuli be-Intanethi abaxhasi banokudibanisa kwiWebhsayithi yethu ngendlela efana neye-hyperlink kwiiWebhsayithi zamanye amashishini adweliswe; kwaye
Amashishini amaninzi avumelekileyo ngaphandle kokucela iinhlangano ezingenzi inzuzo, iindawo zokuthengisa ezithandwayo, kunye namaqela enkxaso-mali ekungabikho kwi-Webhsayithi.
Le mibutho inokudibanisa nekhasi lethu lekhaya, ukushicilelwa okanye ezinye i-website yolwazi ngokukhawuleza nje ukuba unxibelelwano: (a) akukho nangayiphi indlela ekhohlisayo; (b) ayifuni ukuxhaswa ngokukhohlisa, ukuxhasa okanye ukuvunywa kweqela elidibeneyo kunye nemveliso yalo kunye / okanye iinkonzo; kwaye (c) ihambelana nomxholo wesayithi leqela lokudibanisa.
Singaqwalasela kwaye sivume ezinye izicelo zekhonkco ezi zilandelayo:
abathengi abaqhelekileyo kunye / okanye imithombo yolwazi yoshishino;
iindawo zeendawo ze-dot.com;
imibutho okanye amanye amaqela abamele izibonelelo;
ukuphendula, umthetho kunye neenjongo zokubonisana; kwaye
amaziko emfundo kunye nemibutho yorhwebo.
Siza kuvuma izicelo zonxibelelwano ezivela kule mibutho ukuba sithatha isigqibo sokuba: (a) ikhonkco alinakusenza sibonakale singathandeki kuthi okanye kumashishini ethu aqinisekisiweyo; (b) umbutho awunazo naziphi na iirekhodi ezimbi kuthi; (c) isibonelelo esiya kuthi ngokubonakala kwehyperlink sibuyisela ukungabikho kuka-192.168.8.1; kwaye (d) ikhonkco likumxholo wolwazi ngokubanzi.
Le mibutho inokudibanisa nekhasi lethu lekhaya ngelixa ikhonkco: (a) ayikho nayiphi na into ekhohlisayo; (b) ayifuni ukuxhaswa ngokukhohlisa, ukuxhasa okanye ukuvunyelwa kweqela elidibeneyo kunye nemveliso okanye iinkonzo zayo; kwaye (c) ihambelana nomxholo wesayithi leqela lokudibanisa.
Ukuba ungomnye wemibutho edweliswe kumhlathi 2 apha ngasentla kwaye unomdla wokuqhakamshelana newebhusayithi yethu, kufuneka usazise ngokuthumela i-imeyile ku-192.168.8.1. Nceda ufake igama lakho, igama lombutho wakho, ulwazi loqhakamshelwano kunye ne-URL yendawo yakho, uluhlu lwazo naziphi na ii-URL oceba ukuzidibanisa neWebhusayithi yethu, kunye noluhlu lwee-URL kwindawo yethu ongathanda ukuya kuyo. ikhonkco. Lindela impendulo kwiiveki ezingama-2-3.
Imibutho eyavunyelwayo ingaba ne-hyperlink kwiWebhusayithi yethu ngale ndlela:
Ngokusetyenziswa kwegama lethu lenkampani; okanye
Ngokusetyenziswa kwe-locator yendawo enezixhobo ezidibeneyo; okanye
Ngokusetyenziswa kwanoma iyiphi enye inkcazo yeWebhsayithi yethu idibeneyo yinto enengqiqo ngaphakathi kwimeko kunye nefomathi yomxholo kwisayithi leqela lokudibanisa.
Akukho kusetyenziselwa ilogo ka-192.168.8.1 okanye omnye umsebenzi wobugcisa oya kuvunyelwa ukunxibelelanisa engekho kwisivumelwano selayisensi yophawu lwentengiso.
Ngaphandle kokuvunyelwa kwangaphambili kunye nemvume ebhaliweyo, awukwazi ukudala amafayile ajikeleze iiWebhuthi zethu ezitshintsha ngandlela-thile indlela yokubonakala okanye ukubukeka kweWebhusayithi yethu.
U xanduva lwe
Asiyi kubamba inxaxheba kuyo nayiphi na into ebonakala kwiwebhusayithi yakho. Uyavuma ukukhusela nokusikhusela kuzo zonke izibango ezikhulayo kwiWebhusayithi yakho. Akukho ikhonkco (s) kufuneka ibonakale kwiyiphi na iWebhsayithi engachithwa njengento engabonakaliyo, ehlazo okanye ephuli-mthetho, okanye ephula umthetho, ngokungafaniyo, okanye ekhuthaza ukuphulwa okanye ukuphulwa kwamalungelo athathu.
Nceda ufunde iMgaqo-nkqubo Yobumfihlo
Sigcina ilungelo lokucela ukuba ususe zonke iikhonkco okanye naluphi na unxibelelwano oluthile kwiWebhusayithi yethu. Uyavuma ukuba ususe ngokukhawuleza zonke iikhonkco kwiWebhusayithi yethu kwisicelo. Siphinde sigcine ilungelo lokunceda le migaqo kunye neemeko kwaye idibanisa umgaqo-nkqubo nanini na. Ngokuqhubeka ngokudibanisa kwiWebhsayithi yethu, uyavuma ukuba ubophe kwaye ulandele le miqathango neemeko.
Ukususa ii-links kwiwebsite yethu
Ukuba ufumana naluphi na unxibelelwano kwiWebhusayithi yethu ekhusayo nayiphi na isizathu, ukhululekile ukudibanisa kwaye usitshele naliphi na umzuzu. Siza kuqwalasela izicelo zokususa iikhonkco kodwa asibophezelekanga okanye kunjalo okanye ukuphendula ngokuthe ngqo.
Asiqinisekisi ukuba ulwazi olukule website lichanekile, asiyivumeli ukugqiba okanye ukuchaneka kwayo; kwaye asiyathembisi ukuqinisekisa ukuba i-website ihlala ikhona okanye ukuba izinto ezikwinqanaba lewebhu zigcinwe ngokukhawuleza.
Kwimeko ephezulu evunyelwe ngumthetho osebenzayo, asibandakanyi zonke iimpawu, iziqinisekiso kunye neemeko ezinxulumene newebhusayithi yethu kunye nokusetyenziswa kwale website. Akukho nto kule mvume yokukhuphaza:
umda okanye ungabandakanyi wethu okanye uxanduva lwakho lokufa okanye ukulimala;
umda okanye ungabandakanyi wethu okanye uxanduva lwakho lobuqhetseba okanye ukukhwabanisa kakubi;
ukukhawulela nayiphi na yethu okanye amatyala akho nayiphi na indlela engavunyelwe phantsi komthetho ofanelekileyo; okanye
ingabandakanyi nayiphi na yam okanye iimfanelo zakho ezingenakukhutshwa ngaphandle komthetho osebenzayo.
Ukunciphisa kunye nokuthintela uxanduva olubekwe kweli Candelo nakwezinye indawo kulo myalelo-mvume: (a) ziphantsi kwesiqendu esandulelayo; kwaye (b) lawula onke amatyala avela phantsi kwe-disclaimer, kubandakanywa namatyala avela kwisivumelwano, ngokuphambene nokuphulwa komsebenzi osemthethweni.
Nangethuba i-website kunye nolwazi kunye neenkonzo kwiwebhusayithi zinikezelwa ngaphandle kwentlawulo, asiyi kuba noxanduva lokulahlekelwa okanye ukulimala naluphi na uhlobo.
iindidi Akohlulwanga Post yokukhangela
igama Imeyli website
idilesi ye IP
Ukuseta umzila we-TP-Link
Jonga amandla esignali yeWiFi
Uluhlu lwabamnyama / iBhlokhi yabasebenzisi beWiFi
Yintoni i-WiFi hotspot?
Lungisa iiNdawo eziFileyo zeWiFi
Khusela iNethiwekhi yakho yeWiFi
Yeyiphi Idilesi ye-IP emiselweyo?
Kutheni i-Intanethi icotha?
Yintoni Iminyaka yam Ngoku
Uyifumana njani i-router engagqibekanga ip
Ungayibuyisela njani kwakhona i-router yakho kuseto olungagqibekanga